Kedụ ka ndị na-anakọta uzuzu si kee akpa akpa mebiri emebi? - Sffiltech
Ọrụ Nlekọta & Nkwado
Ọkwọ ụgbọ ala & ngwanrọ & Nkwado akwụkwọ ntuziaka Onye ọrụ
Kedụ ka ndị na-anakọta uzuzu si kee akpa akpa mebiri emebi
Akpa nzacha bụ iwepu ájá na mmetọ n’ụlọ akpa. A na-ejikarị usoro kpochapu ájá dị na ntaneti n'elu ihe mgbasa ozi. Featuredị pụtara ìhè bụ arụmọrụ mkpo ala dị elu, ikpochapu uzuzu site na akpa nzacha, mkpochapu ikuku na-adịkarị ala iji ruo 50mg / m & sup3; n'okpuru, ma ọ bụ karịa 5mg / m & sup3;. Ihe ndị chọrọ nchebe gburugburu ebe obibi na-arịwanye elu taa, akpa iwepu uzuzu ura nwere uru ndi ozo.
akpa na-ahụ maka nzacha zuru ezu site na ndị ọbịa, ihe ndị na - ebu (akpa ájá) na njikwa azụ na sistemụ inyeaka ndị ọzọ. Akpa ájá bụ ihe dị mkpa na akpa nzacha. Ihe ahụ, ịkwa akwa, ojiji na ndozi metụtara ọrụ arụmọrụ na arụmọrụ nke sistemụ ahụ niile. Olu ikuku, itinye uche nke uzuzu, nguzogide ibu, udu ikuku gas na iru mmiri, corrosivity Ma ihe ndi ozo nwere ike ime ka akpa ure dara. N'etiti ọtụtụ ụdị ọdịda nke ikpuchi uzuzu, iyi bụ ụdị nkịtị yana ya na njikọ, imepụta na ntinye nke ndị na-anakọta ájá.
Pesdị na ihe na-emebi bagging baging
Akpụkpọrọ akpa ure na-ahụkarị, na-eyi, ọkụ na corrosion.
akpa akpa ihe na-ezo aka na iji uzuzu akpa, n'ihi nzacha ugboro ugboro na ngbanwe steeti mgbanwe, akpa na-emebi na akpa, akpa na uzuzu ma ọ bụ mmegharị ọzọ dị n'etiti ihe ndị mejupụtara, ikuku na-asọ asọ dị elu site na nbipu nke iyi na akwa obodo. .
Ido nkụ na-adị n'ihi njikwa flue gas nke na-adịghị ala ala, ma ọ bụ uzuzu uzuzu uzuzu, ọnọdụ ahụ dị elu karịa nzere okpomọkụ nke nzacha ahụ, nke mere na site n'ọtụtụ ọnọdụ dị elu nke mebiri na mmebi ahụ.
Akpa corrosion bụ ihe ndị na-emerụ ahụ na flue gas mmeghachi omume nke nzacha ahụ, na-eme ka njigide ihe ndị mebiri emebi nke mmebi ahụ daa na ọdịda. More corrosion nke akpa nyo na flue gas mejupụtara gabigara ọnọdụ, enwere ike ekewa n'ime gas corrosion na corrosion mmiri, mbibi gas na-emerụ ahụ na ọnụnọ nke mmiri, nwere ike imebi akpa ahụ.
N'ihi ọnụnọ nke mmiri mmiri na flue gas (dị ka nnụnnụ ọkụ), nguzobe nke ájá na-emechi, na-egbochi oghere akpa ahụ, nke na-ebute akpa ájá dugara na ájá ọdịda.
Akpa uzuzu na-eyi mgbochi na ọgwụgwọ
Gingkpọ uzuzu uzuzu bu isi ihe kpatara ọdịda dara ada. Mgbe ụdị mbibi ndị ọzọ pere mpe, mmerụ nke uzuzu uzuzu ikuku na-emekwa ka ọ dịkwuo eyi. Ikike ma na-eme nhazi akpa akpa, nhazi ikuku, ihicha na nhicha. Etu akpa akpa uyi na-eyi n’ime ọnọdụ ise ndị a: akpa akpa, akpa akpa, akpa akpa, ala akpa na akpa aka n’ime, akụkụ dị iche iche nke iyi na akwa nke ọnọdụ ahụ na ihe dị iche iche, ihe ngwọta dịkwa iche.
Etu akpa akpa n'ọnụ
Akpa akpa n’akpa uwe na-eyi ihe ndị ọzọ n’akpa n’akpa ruo 400mm ma ọ bụ ihe na-erughị ya, nke ka ukwuu n’ime na n’azụ. Ofdị a na-eyi n'oge bụ n'ihi ikuku ikuku agbakọtara n'etiti akpa ahụ, na-agba n'akụkụ akpa nke akpa ahụ akpa. N’ebe ndị na-aga n’ihu n’ihu na-aga n’ihu ikuku na-agagharị, akpa dị n’ime akpa ikuku nke ikuku na-erugharị, mgbe ahụ, a na-afụ akwa isi, n’ikpeazụkwa, a na-afụcha ihe nzacha. Mgbe akụkụ nke akpa ahụ mebiri emebi, nguzogide nke akụkụ ahụ mebiri emebi ga-agbada, ikuku flue ga-abanye ngwa ngwa site na akụkụ ahụ mebiri emebi wee merụọ akụkụ ahụ mebiri emebi na-etolite voids ọhụrụ na oghere ikuku flue ọhụrụ. Na-afụ ụfụ mmebi n'afọ, ọbụlagodi mgbe akpa akpa na nkewa nke akpa. Damagedị mmebi a tumadi nrụgide ikuku dị oke oke, na-eme ka ọsụsọ dị mkpụmkpụ, nrụpụta efere ifuru na ihe ndị ọzọ, ozugbo achọtara ụdị uwe a, tupu akpa ọhụụ, a ga-enyocha ma ọ bụ mezie ihe afụ ahụ.
Etu akpa ahu na-eyi:
Etu akpa akpa ahu, na-ahụkarị, akpa akpa n'etiti yi metụtara, kere n'ime ọtụtụ mgbe:
Ọ bụrụ na mmebi ahụ sitere na mpụta, nke mebiri emebi n'ime oghere mkpọchi akpa ahụ, na-egosi na akpa ahụ kwụchiri nkwụchi ma ọ bụ nzere, akpa ihe akpa ma ọ bụ nrụgide ntụtụ dị oke, ntụtụ ahụ na-adịkarị ike, nke mere na nzacha ahụ. akpa na akpa akpa Emebiri emebi kọntaktị ebe mgbaji agbaji. Enwere ike idozi nsogbu ndị dị otú ahụ site na ịgbanwe akwa akpa ma ọ bụ ịgbanwe igwe ikuku.
Ọ bụrụ na mmebi ahụ sitere na mpụga ya n'ime, mebiri emebi n'ụlọ mkpọ akpa n'akụkụ ebe ịkpọtụrụ. A na-ahụkarị na mpụga akpa (n'akụkụ akpa nyo ma ọ bụ onye otu igbe) na akpa nwere ụzọ nke eyi na eyi. Weardị uwe a bụ akpa akpa deform ma ọ bụ nwụnye akpa akpa pere mpe, akpa nzacha buru ibu ma ọ bụ daa dayameta, na-akpata akpa nzacha na akpa nzacha, akpa nzacha na kọntaktị n'etiti ihe ntinye igbe dị na usoro nke azụ. gaa na akpa nyo Bloated esemokwu ọ bụla ọzọ na-eyi. Ohaneze mkpa iji dochie akpa akpa, wee hụ na nrụnye. Usoro nhicha akpa akpa, kwesịrị izere oghere nzacha akpa aka na oghere dị n'agbata akpa na igbe igbe ahụ pere mpe.
Akụkụ nke ala nke akpa akpa rọba:
Mgbada dị ala nke akpa ahụ akpa nwere ihe na-agbakarị na ala nke akpa nzacha elu 300mm ma ọ bụ obere, na-eyi karịa n'otu akụkụ, nke kachasị njọ, jiri nwayọọ nwayọọ kpoo ọkụ. A ga-etinye eriri akwa mpaghara ahụ, ọ nweghị akwa ọfụma na-adị ike. Uwe dị otú a na akwa n'ihi mmebi nke osisi ifuru, oghere oghere dị obere, akpa mkpuchi akpa, akpa akpa dị ogologo na ihe ndị ọzọ. Akpa ndozi onye n'otu n'otu na igbe igbe mgbidi kpokọtara. Damagedị mbibi ahụ kwesịrị ka akpachapụ anya nyochaa ọkwa osisi ifuru, ma kwesiri iji ya mee akpa ụlọ akpa mma.
Mgbanaka na-eyi na akụkụ ala nke akpa nzacha:
Na ala nke akpa a kpuchiri akpukpo ahu di mpụta. Weardị a na-eyi na ikuku na-emebi n'ihi mbuze ikuku na-ebute ihe dị na mpaghara ahụ, nke na-egosi na mpaghara ikuku nke mmiri na-asọpụta. Ihe a na-ahụkarị na ngwa ngwa nzacha dị elu mkpokọta mkpokọ ma ọ bụ obere mkpụmkpụ belata ájá siri ike, mgbe akpa nzacha mebiri, nbibi nke soot diagonal emebi, ka mmebi ahụ na-aga n'ihu, nnukwu mbibi akpa ahụ nwere ike ibute mgbawa afọ.
Akụkụ dị n'ime ime obere akpa ahụ: ihe a na-ahụkarị na ọnọdụ akpa ahụ, ọtụtụ ihe dị iche n'etiti oghere na dayameta akpa buru oke ibu, na-ebute mkpofu akpa na nhichapụ mgbe mgbanwe ntụgharị buru ibu, na mmebi mkpuchi akpa ahụ mebiri emebi. Enwere ike idochi oghere akpa dị elu.
N'azụ ala akpa akpa a na-eyi:
Ala ndị gbawara agbawa doro anya nke ịkwa akwa. Ala nke eriri akwa ahụ, akwa nhicha ahụ na-adị, nke siri ike mgbe ala akpa ahụ mebiri ma ọ bụ kpam kpam. Weardị uwe a na akwa akwa n'ihi ọkwa nke ihe dị na hopper dị oke elu, ikuku na-asọpụta uzu ikuku na-akpachapụ anya ozugbo, na-ebute eyi na akwa. Site na iwusi ike nke uyi na-ewepu ahihia, megharia uzu ahihia nke kpochapu uzu ahihia, iji zere ikpoko uko buru oke ibu, nwere ike igbochi mbubo nke hopper bag n’ime akpa nzacha.
N'ime ala akpa akpa a na-ahụkarị na ala akpa mkpuchi dị obere ma ọ bụ obere akpa akpa, akpa mkpuchi akpa nwere ike ịkwado ala akpa. Ihicha akpa na nhichapu akpa mere mgbe ala akpa ahụ na-eme mkpọtụ, na-ebute ala nke akpa akpa ahụ.
Akpa uzuzu n'ime uwe:
Akpa dị n’ime mmebi karịrị mpi mgbanaka nke akpa ahụ na ọdịiche nke akpa ahụ buru ibu, na-eme ka nhicha akpa ma na-agbanwe ihe na-agbanwe agbanwe buru ibu, akpa dị n’ime na akpa akpa esemokwu ahụ na-akpali, na-eme ka akpa ahụ na-eyi .
Akpa n'ime akpa mebiri emebi n'ime akpa ahụ, enwere ọnụnọ nke corrosion na eyi, ọ na-abụkarị corrosion nke akpa ahụ kpuchiri ya na akụkụ akpọchi akpọgasịrị, elu nke akpa akpa n'oge a dị ka akwụkwọ akụkọ. ga-abụ akpa esemokwu akpa, akpa akpa ikpeazụ. Ojiji nke akpa di elu ejikọtara ya na akpa akpa wee zere imewe akpa akpa ahụ.
Akpa uzuzu bu obi nke ndi kpokọtara uzuzu uzuzu, ihe ga - eme ka akpa ghara iru oru. Ihe bụ isi akpa akwa na akwa akwa akpa na ngwa nke uzuzu, nrụpụta, ogo nrụnye. Usoro a na - ebido na mpaghara na - ebido n’obodo, mana ozugbo etolitere obere oghere ọ bụla, ọ na - agbasa ngwa ngwa, na - eme ka akpa buru ibu mebie. Ya mere, iji mee ka ọrụ nyocha ahụ dịkwuo ike, nnwale, nchọpụta mbụ nke obere uwe na akwa, mana iji zere ime ka akpa nzacha buru ibu na-eyi ihe dị mkpa.
Osote: Kedu otu akpa akpa mkpokọta si ebu akpa ọrụ?